बिहान ९ बजे देखि मध्यान्न १२ बजेसम्म जन्मिएका व्यक्तिहरु कति भाग्यमानी ! हेर्नुहोस् ! – Sandesh Press
August 15, 2021 373
एक व्यक्तिको जन्म भएपछि, उसको मुहूर्ता र नक्षत्र कुन तर्फ छ , कुन मितिमा, कुन पक्षमा उसको जन्म भयो ,त्यसले उसको भविष्य निर्धारण गर्दछ। कुन प्रहरमा जातकको जन्म भयो भन्ने थाहा भएर मात्र उसको भविष्य निर्धारण गर्न भने निकै गार्हो हुन्छ किनकि यसको लागि नक्षत्र, मुहूर्ता जस्ता कुरा पनि आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिको जन्म कुन प्रहरमा भएको सम्बन्धमा सामान्य जानकारी |
Nextभगवानलाई सम्झिदा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र मिल्नेछ नकरात्मक नतिजा
निकै फटाहा रहेछन् ३४ वर्षीय रामकुमार